Digniin ama waayida magdhawga laga helo Qasnada Caymiska
Haddii adigu tusaale ahaan aanad si fir-fircoon u raadsan shaqo ama aad iska dhaafto inaad samayso wargelinta hawlahaaga waxaad heli kartaa digniin. Haddii tani dhacdo dhowr goor waxaad waayi kartaa magdhawga aad ka hesho Qasnada Caymiska.
Maxaad samaynaysaa haddii aad hesho digniin ama go'aan ku saabsan yaraynta magdhawga.
Waxaad marka hore naga heleysaa go’aan hordhac ah. Inta aannan gaari go’aanka kama dambaysta ah waxaa fursad lagu siinayaa inaad soo gudbiso ra’yigaaga. Waxaad ku soo qoreysaa foomka “Jawaab ka bixinta xiriirka” oo la socda warqadda go’aanka hordhaca ah. Buuxi oo u soo dir foomkaas cinwaanka ku qoran foomkaas.
Foom: Jawaab ka bixinta xiriirka
Haddii aadan ku qanacsanayn go’aanka kama dambaysta ah waxaad codsan kartaa inaan dib uga fiirsanno. Markaas waxaad buuxineysaa foomka ”Codsi dib-uga-fiirsasho” oo noo soo direysaa.
Foom: Codsi dib uga fiirsasho
Haddii aad dayacdo shaqo raadintaada
Haddii aadan raacin qorshihii aan ku heshiinnay waxaad markaas waxaad dayacdday shaqo raadintaadi.
Tani waxay keeni kartaa digniin ama yaraynta magdhawga laga helo Qasnada Caymiska
gacan ka geysan sidii aan qorshe kuugu dejin lahayn
warbixinaha waxa aad samayso ku soo gudbin waqti
raacin heshiiskii inaad na soo booqato ama nala soo xiriirto
ka qayb qaadan dadaal ama hawl
raadsan shaqo ama waxbarasho aanu kuu soo tilmaamnay
u raadsan shaqo si fir-fircoon
Sidaan ayaa dhacaysaa haddii aad dayacdo shaqo raadintaada
Marka ugu horreysa: waxaa lagu siinayaa digniin.
Marka labaad: 1 maalin lacag la’aan ah.
Marka saddexaad: 5 maalmood oo lacag la’aan ah.
Marka afraad: 10 maalmood oo lacag la’aan ah.
Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqo la’aanta, waxaa 45 maalmood ka dib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.
Haddii aad dheereysto waqtiga shaqo la’aanta
Haddii aad diido shaqo, tababarka goob shaqo ama barnaamij kale ama dadaal, waxaad dheeraynaysaa wakhtigaaga shaqo la'aanta.
diido shaqo haboon oo lagugu casuumay
diido waxbarasho aad heshay taas oo anagu aanu kuu tilmaamnay inaad codsato
si cad uga hortimaaddo in lagu shaqaaleeyo
diido dadaal ama hawl.
Sidaan ayaa dhacaysa haddii aad dheereysto wakhtigaaga shaqo la’aanta
Marka koowaad: 5 maalmood oo lacag la’aan ah.
Marka labaad: 10 maalmood oo lacag la’aan ah.
Marka saddexaad: 45 maalmood oo lacag la’aan ah.
Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah. Haddii lacagta aad qaadataa ay ku salaysan tahay lacagta shaqala’aanta, waxaa 45 maalmood kaddib hoos loogu dhigayaa 223 kr maalintii.
Haddii adigu aad sabab u tahay shaqo la'aantaada
Haddii aad iskaa uga tagto shaqo waa adiga laf ahaantaada qofka sababay shaqo la'aantaada.
shaqada ka tagto adigoo aan haysan sabab macquul.
u dhaqantay qaab keenay in lagu eryo.
Sidaan ayaa dhacaysa haddii adigu aad sabab u ahayd shaqo la'aantaada
Marka ugu horeysa iyo marka labaad: 45 maalmood oo lacag la’aan ah.
Haddii aad si ula kac ah u soo gudbiso warbixino qalad ah
Qasnada Caymiska waxay go’aan ku gaari kartaa inay lacagta kaa joojiso muddo dheer. Taasi waxay dhacaysaa haddii aad si ula kac ama taxadar la’aan ah Qasnada Caymiska ugu soo gudbiso warbixino qaldan ama been ah si aad u hesho lacag aadan xaq u lahayn.